Puntland oo bilowday diiwaan gelinta Guddiyada soo xulaya 5 Kursi oo lagu Dooranayo Garowe - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Puntland oo bilowday diiwaan gelinta Guddiyada soo xulaya 5 Kursi oo lagu Dooranayo Garowe - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Guddiga Maamulka Doorashada ee Puntland (SEIT Puntland ) ayaa maanta bilaabay diiwaangalinta Guddiyada soo xulista Ergada 5 Kursi ee horay Jadwalkooda ay u shaaciyeen .
Guddiyada soo xulaya ergada dooraneysa xildhibaannada ayaa ka kooban Odayaasha dhaqanka iyo Bulshada Rayidka ah, iyadoona loo sameeyay Tababar, waxaana laguna wareejiyay Foomka diiwaangalinta Ergada.
Kuraasta ugu horeysa ee Golasha Shacabka oo lagu dooranayo magaalada Garowe ayaa kala ah:
1- HOPE -196
2- HOPE 249
3- HOPE 235
4- HOPE 200
5- HOPE 166
Previous articleJen. Biixi oo heshiisiiyey Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan iyo Hoggaamyaha Jabhadda Jen. Xuud
Next articleAfhayeenkii Xukuumadda oo Caafimaad ahaan loogu qaaday dalka Turkiga (Sawirro)